တရုတ် JT-AEC2361a Series အိမ်သုံး လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ |အက်ရှင်
JT-AEC2361a စီးရီး အိမ်သုံး လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်
တစ်smart home style ဒီဇိုင်းသည် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အိမ်သုံးဓာတ်ငွေ့အချက်ပေးစက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။. အဲဒါs အထွက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် တိုးချဲ့ထားသည်။ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်. အဲဒါ cမီးဖိုချောင်ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် အမျိုးမျိုးသောထွက်ရှိမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။, aအုပ်စုများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် သုံးစွဲသူများထံ အသုံးချနိုင်သည်။.
1) ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း- စမတ်အိမ်ပုံစံ၊ လှပကျစ်လစ်သော၊ တင်သွင်းထားသော အရည်အသွေးမြင့် ABS၊ ရက်ရောသောအရောင်လိုက်ဖက်မှု၊ မီးဖိုချောင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်ဖက်ရန်လွယ်ကူသည်။
2) အမျိုးမျိုးသော ထောက်လှမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များ- မတူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မတူညီသော ဓာတ်ငွေ့ရင်းမြစ်များ၏ စောင့်ကြည့်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် မီသိန်းနှင့် ပရိုပိန်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။;
3) မြင့်မားသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်စွမ်းဆောင်ရည်tအရက်နှင့် ရေငွေ့ကို တွန်းလှန်ရန် အာရုံခံ filter အမြှေးပါးကို တပ်ဆင်ထားသည်။အာရုံခံကိရိယာကို ကာကွယ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်ခံခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို များစွာတိုးတက်စေပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ရရှိစေသည်။ထူးထူးခြားခြား စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို အလွန်အကဲဆတ်သော တုံ့ပြန်မှု၊
4) မြင့်မားသော sensitivity: တုံ့ပြန်မှုအချိန်<9s (t90)၊ ချက်ခြင်း အချက်ပြမှုများ၊ အိမ်သုံးဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဘေးကင်းမှုကို အာမခံပါသည်။;
5) အထွက်မုဒ်- မတူညီသောအသုံးပြုသူများ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့် အခြားစိတ်ကြိုက်ကိရိယာများ (အိမ်သုံး solenoid valve / exhaust fan) ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အထွက်မုဒ်နှစ်ခု၊;
၆)ရွေးချယ်ခွင့် အီးxtended ဆက်သွယ်ရေး- သီးခြားကွန်ရက်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ကို သိရှိနိုင်ရန် ပြင်ပ WiFi မော်ဂျူးမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများဖြင့် အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်သည့်အခါတွင် SMS အကြောင်းကြားချက်များကို ပေးပို့နိုင်သည်။.
ထုတ်ကုန် သတ်မှတ်ချက် လက္ခဏာများ
ထောက်လှမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များ Nသဘာဝဓာတ်ငွေ့
Operating အပူချိန် စာ-၁၀℃~+၅၅℃၊နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ≤၉၃%±3%
အထွက် 1 set သို့မဟုတ် 2သတ်မှတ်အဆက်အသွယ်အထွက်၏ s၊ အထွက်မုဒ်သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်။. Pulse output DC12V၊ passive ပုံမှန်အားဖြင့် အများဆုံးဖွင့်နိုင်သော အမြင့်ဆုံး access current 2A၊ အမြင့်ဆုံး access voltage DC30V/AC250V
Protection အဆင့် IP30
Drop အမြင့် 1m
Communication နည်းလမ်း ပြင်ပ module၊GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်
အထွက်နှစ်ခု- pulse output + passive ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အော်ပရေးရှင်းဗို့အား၊ အထွက်လိုအပ်ချက်များနှင့် အထွက်လိုင်းအရှည် (စံအရှည် 25 စင်တီမီတာ) ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။.
အထွက်နှစ်ခု- DC12V အဆင့်-ခြယ်လှယ် + သွေးခုန်နှုန်းအထွက်
ကျေးဇူးပြု၍ အော်ဒါတင်သောအခါတွင် လည်ပတ်ဗို့အား၊ အထွက်လိုအပ်ချက်များနှင့် အထွက်လိုင်းအရှည် (စံအရှည် 25cm) ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။ဓာတ်ငွေ့များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြပါသည်။.
ကျေးဇူးပြု၍ အော်ဒါတင်သောအခါတွင် လည်ပတ်ဗို့အား၊ အထွက်လိုအပ်ချက်များနှင့် အထွက်လိုင်းအရှည် (စံအရှည် 25cm) ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။ဓာတ်ငွေ့များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။နှင့်GPRS/NB-IoT/WiFi/LoRa/Bluetooth ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး မော်ဂျူးများကို ရွေးချယ်နိုင်သည်.
ယခင်- BT-AEC2386 အိတ်ဆောင်လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်
နောက်တစ်ခု: AEC2301a A-Bus အချက်ပြ Gas Leak Alarm Controller
lpg ဓာတ်ငွေ့ detector, ပုံသေဓာတ်ငွေ့ detector, မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်, ဓာတ်ငွေ့ detector, တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ထောက်လှမ်း, မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေး,